सस्ता युरोपेली गन्तव्य र कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा टर्की > सस्ता युरोपेली गन्तव्य र कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
सस्तो यूरोपियन गन्तव्यहरू तातो विषय हुन्. सबै भन्दा पहिले, युरोप मा पर्यटकहरु ठूलो देखि सबै देख्न सक्नुहुन्छ कफी पसल गर्न सुन्दर तटहरू. Asaresult of cities like भेनिस, रोम, र पर्यटकहरु यात्रा को पेरिस लाखौं हरेक वर्ष युरोपमा. हामी हाम्रो पाठकहरु लागि सस्ता युरोपेली गन्तव्य सूची सिर्जना गरेका. यस सूचीमा ट्रेन द्वारा कसरी पुग्ने भनेर समावेश छ.
पोर्टो, पोर्चुगल हाम्रो पहिलो सस्ता युरोपेली गन्तव्यहरू छ
पोर्टो बारेमा सबैभन्दा उल्लेखनीय छ यसको’ अविश्वसनीय मदिरा. समुद्र द्वारा यस सस्ता युरोपेली गन्तव्यहरू एक युरोपेली मिनी-महानगरबारे छ. पोर्टो संस्कृति लागि ठूलो छ र त्यसै गरी बाहिर प्रेम गर्ने मान्छे को लागि राम्रो छ. यो संग्रहालय र यो सस्तो युरोपेली गन्तव्य को वास्तुकला ईश्वरीय छन्. पक्कै पनि, भ्रमण गर्न एक ठाउँ.
For directions on how to get to Porto’s साओ Bento रेल द्वारा स्टेशन प्रविष्ट बचत एक ट्रेन.
ओस्लो एक राखे-फिर्ता शहर हो. एक दिउँसो Siesta आनन्द. यहूदी, क्रिश्चियन, र इस्लामी संस्कृति. भ्रमण पुरातन चर्च र ghettos समयमा दिन. खाना स्वादिष्ट छ, विशेष गरी तपस. को मा impromptu गिटार संगीत सडकमा captures ओस्लो को आराम वातावरण. यो सस्तो युरोपेली गन्तव्य शहर शायद सबै भन्दा राम्रो छ आकर्षण युरोप र एक धनी इतिहास मा.
ओस्लो प्राप्त गर्न कसरी निर्देशनहरू र मूल्यहरू लागि सन्त Justa रेल स्टेशन एक ट्रेन सुरक्षित साइट हेर्न.
भ्यालेन्सिया छ3सुन्दर समुद्री तट. फलस्वरूप, यो राम्रो आउटडोर गतिविधिहरु छ. एक सस्ता युरोपेली राष्ट्रिय निकुञ्ज एक पैदल यात्रा लागि ठूलो ठाउँ. ला अल्बुफेरा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक पैदल यात्रा लागि ठूलो ठाउँ छ. खाद्य पनि लागि भ्यालेन्सिया प्रेम यसको ताजा उत्पादन.
For directions on how to get to Valencia’s स्टेशन del Nord ट्रेन स्टेशन एक ट्रेन बचाउनुहोस् वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस्.
इस्तानबुल, टर्की हाम्रो अन्तिम सस्तो युरोपेली गन्तव्य हो
अर्को अचम्मको र सस्तो शहर इस्तानबुल छ. टर्की राजधानी सँगै ल्याउँछ किनभने युरोप र एशिया. सम्पदामा धनी, सुन्दर वास्तुकला, र विदेशी परिदृश्य. गुम्बजका स्काइलाइन्स र इस्तांबुलको साथमा एक निलो समुद्री रन. यो शहर अचम्मको दृश्य संग सचेत लागि ठूलो छ, गन्ध, र राजधानीमा ध्वनिहरू. लोकप्रिय खाना यहाँ doner Kebab र हुन सक्छ कि टर्की मीठो व्यवहार छ सडकमा मा खरिद. माथिको सबै धेरै उचित मूल्य मा अनुभव गर्न सकिन्छ
इस्तानबुलको सिर्केसी स्टेशनमा कसरी पुग्ने भन्ने बारे निर्देशनहरूको लागि बचत ट्रेनको वेबसाइटमा जानुहोस्.
हाम्रो साथ आफ्नो अर्को रेल यात्रा बुक
के तपाई सस्तो यूरोपियन गन्तव्यहरु को यात्रा को लागी योजना गरी रहनु छ? किन लिन3फेला मिनेट सस्ता रेल यात्राको. हाम्रो वेबसाइट लगइन अब र सबै भन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त, छिटो र सजिलो. हामी भुक्तानी सबै प्रमुख प्रकारका स्वीकार.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcheap-european-destinations%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml र तपाईं / NL गर्न / de वा / RU र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्राभपोर्टगल travelspain टर्की